AnyDWG, si loogu beddelo faylasha dwg adigoon haysan AutoCAD - Geofumadas
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk
AnyDWG waa khadad dhaqaale oo la sameeyey si loogu badalo faylasha AutoCAD si qaabab kala duwan.
Waxqabadka ugu wanaagsan ee qalabkan yar ay leeyihiin, ayaa ah inay u oggolaadaan beddelidda qaabab dwg ah AutoCAD R2.5 iyo AutoCAD 2009. Sidoo kale waa la iibsan karaa in habsami u socodka lagu sameeyo tiro ahaan, waxa aan u naqaanno dufcad ahaan.
Barnaamijyada intooda badani waxay ku jiraan guddi isku mid ah, ikhtiyaarka ah in lagu daro faylal shakhsiyadeed, dhamaystiran faylasha, xitaa haddii faylasha la ilaaliyo lambarka sirta ah sida uu ku dhacayo DWF, habka loo yaqaan folder and output file.
Kama xuma shirkadaha ama farsamayaqaannada shaqadoodu u baahan tahay beddelaad ballaaran oo isdaba joog ah. Xalalka kala duwan waxaa ka mid ah:
DWG ilaa DXF, waxay u oggolaaneysaa isbeddellada u dhexeeya qaababkan labada dhinacba, oo leh noocyo laga soo bilaabo R2.5 ilaa 2009. Xitaa waa suurtagal in lagu daro faylal kala duwan oo ah dxf iyo faylasha dwg.
DWG in PDF, Dabcan tan waxaa laga samayn karaa AutoCAD ama Acrobat, laakiin shaqeynta qalabkani waa inuu awood u leeyahay in uu ku sameeyo qaybta, iyo dabcan, aad u jaban.
DWG si sawir leh, ka beddel qaababka dwg / dxf si qaab muuqaal leh: TIF (TIFF), JPG (JPEG), BMP, GIF, PNG, TGA, PCX, WMF iyo EMF
PDF ilaa CAD, waxay u badashaa walxaha vector ee pdf ilaa dwg ama dxf, waxay sidoo kale soo saartaa sawirada muuqaalka ah.
DWF DWG, waxay u oggolaaneysaa in ay u rogaan faylasha macaamiisha dwg ama dxf, waxay taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee guryaha ku yaal xayndaabta guryaha xitaa bogag badan.
DWG ilaa DWF, waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto faylasha dwf
Gabagabadii, aalado wanaagsan oo lagu shaqeeyo faylasha dwg iyada oo aan lahayn AutoCAD noocyo kala duwan. Dhammaantood waa la soo dejisan karaa nooca tijaabada ah AnyDWG.
Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa codsiyadaas bogga AnyDWG.com
Post Previous" Hore Sida loo abuuro cilaaqaadyo leh AutoCAD Macaamiisha 3D
Post Next Khariidadaha Google offline iyo download images geo-referencedNext »
Hal Jawaab "AnyDWG, si loogu beddelo faylasha dwg adigoon haysan AutoCAD"
ODAR isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiib saalax Waan jeclaan lahaa inaan helo ama helo qaababka ugu wanaagsan ee loo maro lisp pata autcad.